Siyanisa Kupa Kwako neMifananidzo | Martech Zone
Siyanisa Chikafu Chako neMifananidzo
Svondo, October 8, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Shamwari uye wandaishanda naye, Pat Coyle, akandipa rumbidzo kwandiri nezveblog rangu. Akati chimwe chezvinhu chaanoona ndechekuti ini ndinogara ndichitora nguva yekuisa basa pamifananidzo pamwe nezviri mukati. Ichokwadi chaizvo - chimwe chinhu chandinoita nekupinda kwega kwega. Heano maitiro angu anokurumidza uye akapusa:
Kana ini ndisina mufananidzo kana vhidhiyo yemusoro wenyaya, ndinotarisa chidimbu chemumiriri clip-art paMicrosoft's Clipart saiti. Ini ndinotsvaga ndichishandisa Firefox kuti ndikwanise kungo chengeta gif yemufananidzo kudesktop yangu kuti ndiite nyore. Kushandisa IE kunoita kuti iwe uende kuburikidza neyakaipisisa Clip art chirongwa neHofisi… zvinongobatsira chete kana iwe uchinyatsoda kugadzirisa kana kuisazve mufananidzo.
Kana ini ndiine chifananidzo, ini ndinowanzo chiunza muIllustrator uye ndoyedza kuchikurisa kuti chikwane munzvimbo yandinayo. Handidi mifananidzo midiki uye inotora nzvimbo yakatwasuka… ini ndinowanzo shandisa align = left kana align = kurudyi kuzviisa kune ese mativi ekupinda kuti isapinda munzira yekuverenga iyo yekupinda , asi zvakadaro zvinowedzera rumwe ruvara kwazviri.
Hechino chimwe chikonzero nei ndichiwedzera clip art: RSS. Kana vanhu vakanyorerwa kuchikafu changu, ini ndoda kuzvitsauranisa kubva kune yakasarudzika runyorwa rwezvinyorwa zvekudya zvavanowana zuva nezuva. Ndinozviona ndiri kuongorora misoro yezvinyorwa uye zvemukati ... asi ini kazhinji handitore kwete yemifananidzo yandinoona mune yekudya.
Heino muenzaniso… ndeipi inobata pfungwa dzako?
Siyanisa chikafu chako! Shandisa mifananidzo! Ini handigone kuona kuti kana izvi zvinotungamira mukuwedzeredzwa kwekuverenga kana kuchengetedza… asi chokwadi chekuti Pat akachereketa chinoita kuti ndinzwe sekunge chingaite.
Hupfumi Hutsva: Izvipe Kure
Mosh weShuga Plums
Gumiguru 12, 2006 pa 3:07 AM
Saka ichokwadi. Chero bedzi ichichengeterwa padiki - ini ndinoda RSS nekuti inoda yangu yekufona-kumusoro 😉